နောက်ကြောင်း ပြန်မလှည့်ကြေး (အင်္ဂလိပ်စာ သင်ခန်းစာ)
“နောက်ကြောင်း ပြန်မလှည့်ဘူး” ဆိုတဲ့စကားက ဒီနေ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ စကားတစ်ခွန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ပေးပြီးသား ကတိကို ပြန်မပြင်ဘူး၊ လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ် ထားတဲ့ကိစ္စကို ပြီးပြတ်တဲ့အထိ ဆက်လုပ်သွားမယ်ပေါ့။ ဒီစကားကို ဥပမာနဲ့ တင်စားပြောဆိုတဲ့ မြန်မာစကားတစ်ခုလည်း ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါက “ဘုရင့်နောင် ဖောင်ဖျက်” ဆိုတဲ့ စကားပေါ့။ မြစ်ချောင်းတွေကို ဖောင်ဖွဲ့ ကူးဖြတ်ပြီး တစ်ဖက် ကမ်းရောက်တာနဲ့ ဖောင်ဖျက် ပစ်လိုက်တော့ နောက်ကြောင်း ပြန် လှည့်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘဲ ရှေ့ဆက်တက်ဖို့ပဲရှိတော့တဲ့ သဘောမဟုတ်လား။ ဒီလိုအလားတူတဲ့ စကားလည်း အင်္ဂလိပ်မှာ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ “burning your bridges” လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ပြီးသား ကိစ္စကို ဆက်လုပ်မယ် ဆိုပါတယ်။
ဆိုပါတော့ သင့်လက်ရှိအလုပ်က နေရာကောင်း၊ လစာလည်းကောင်းတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဒီထက် ကောင်းတဲ့ အလုပ်တစ်ခု ကမ်းလှမ်းခံရတယ်။ ပထမတော့ အဲ့ဒီအလုပ်ကို လက်ခံရနိုးနိုး၊ မပြတ်မသား ဖြစ်နေ တယ်။ နောက်တော့ လက်ရှိအလုပ်ကထွက်လိုက်ပြီး အလုပ်သစ်ကိုလက်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။ စိတ်ထဲ မှာတော့ နောင်တရ သလိုလို ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ မပြင်တော့ဘူးလို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒီလိုပြောလို့ရတယ်။
I have burned my bridges. (bridges ကို plural နဲ့ ပဲသုံးရမယ်။)
– You can burn your bridges when you are offeredanew job.
– When you have burned your bridges, your boss will never let you return to your old job.
“Burning your bridges” က ဘုရင့်နောင် ဖောင်ဖျက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆင်တူတဲ့ “burning your boats” ဆိုတဲ့ စကားကနေ လာပါတယ်။ ရှေးရှေးတုန်းက တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ စစ်ဆင်ရေး လှေတပ်တွေကို ကွပ်ကဲတဲ့ စစ်သူကြီးတွေဟာ ရန်သူ့နယ်မြေကို ဆိုက်ကပ်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် မိမိတို့ရဲ့ လှေ၊ သင်္ဘောကို ဖျက်ဆီးပစ်ခိုင်းပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုလုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သေမြေကြီး၊ ရှင်ရွှေထီး သဘောနဲ့ တိုက်ပွဲမှာ အောင်မြင်မှ အိမ်ပြန်ကြတော့မယ်ပေါ့။ နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ ဘူးလေ။ အဲ့ဒီလို လှေတွေကို မီးရှို့ဖျက်ရင်း တံတားတွေရှိခဲ့ရင် တံတားတွေကိုပါ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြရာကနေ ဒီ expression တွေ ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
Burning the bridges ဆိုတဲ့စကားကို အခုတော့ စစ်သားမဟုတ်တဲ့ သာမန်အရပ်သားတွေပါ သုံးပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး နောက်ကြောင်း ပြန်မလှည့်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာ ပြောကြတယ်။ နောက်ကြောင်းပြန်မ လှည့်တော့တဲ့အခါ အရင်တုန်းကအလုပ်၊ အပြုအမူတွေ ပြန်မ လုပ်တော့ဘူး၊ အရင်ဘဝကို ပြန်မသွားတော့ ဘူးဆိုတော့ burning bridges လုပ်ပြီးတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် ဘဝသစ်ကိုစပြီလို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ Burning bridges က ဘဝဟောင်းရဲ့ အဆုံးသတ်ဖြစ်သလို ဘဝသစ်ရဲ့အစလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေကိုတော့ Bridge burner လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ကြီးမားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ တစ်နည်းအားဖြင့် ဖောင်မဖျက်မီ နောင်အခါမှ နောင်တမရစေဖို့တော့ အကြိမ်ကြိမ် စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အပြီးဖြတ်ပြီးတဲ့ အခါ အဲ့ဒီဘဝကို ပြန်လာလို့ရမှာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Bridges Burner တွေအတွက် သတိပေးထားတဲ့ စကားပုံလည်းရှိပါတယ်။
Don’t cross your bridges until you come to them. ပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ အချိန်မတန်သေးခင် မလှုပ်ရှားပါနဲ့ဦး – Do not act until the time is right. လို့ ဆိုလိုတာပါ။